Abenzi be China LSR Mask kunye nabathengisi | UChapman
✭Ngenxa yemfuno ephezulu yeli candelo le-silicone engamanzi, senze iiseti ezi-6 zokubumba kwe-LSR kubathengi bethu xa bebonke. Inani leemingxunya kwisikhunta ngasinye yi-4 cavity, kwaye ngaphambili nangasemva iitemplate zenziwe nge-S136 yentsimbi enzima, kwaye ubunzima yi-HRC48-52 degrees.
✭Ngenxa yeemfuno ezingqongqo zokubonakala kwemveliso, umgca wokwahlula imveliso kufuneka ulawulwe ngaphakathi kwe-0.03mm. Ukuchaneka kokulungisa ukungunda kwethu kufuneka kulawulwe ngaphakathi kuluhlu lwe-0.005-0.01mm. kunye nokuchaneka komhlaba ngokungaqhelekanga, kunzima kakhulu ekuveliseni ukungunda kwethu. Kuya kufuneka siqinisekise ukuba izixhobo zethu zokulungisa kunye netekhnoloji inokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Ngeentsuku ezingama-35 zokulungiswa kunye nokuveliswa, uvavanyo lwethu lokungunda lube yimpumelelo, kwaye abathengi bethu bafakwa kwangoko kwimveliso yobuninzi.
Umngundo NO. I-CPM-20-S1066
Inkqubo yokugqiba umphezulu VDI-12
Izinto zePlastiki Silicon
Icandelo lobunzima 50.7g
Uyilo lweSoftware UG
Ubungakanani Icandelo I-128.00 X 120.00 X 65.00mm
Ukusetyenziswa Icandelo lezonyango
Ubukhulu zomngundo I-400 X 450 X 417mm
Igama lendima Imaski ye-LSR
Umngxunya womngundo 1 * 4
Imbaleki Imbaleki ebandayo yesango elingaphantsi
Izinto zomngundo I-S136 / P20
Umjikelo woBomi beMold 1,000,000
Ixesha lokukhokhela Iintsuku ezingama-35
Ixesha Lomjikelo Womngundo: Ii-120's
Intlawulo T T
Ifakelwe isixhobo sokuphefumla esinobuchule obunokusetyenziswa kwakhona esinetywina elomeleleyo lomoya, iMaski yayiyilwe kwasekuqaleni yenziwa yabasebenza ngaphambili kwiindawo ezinobungozi. Ngoku yenziwe yafumaneka kuye wonke umntu.
Le maski ikwangowokuqala ngohlobo lwayo * kuba iqinisekisa amanqanaba aphezulu okhuselo enkosi kuyilo lwayo lwecartridge. Ngenxa yokuba yenziwe ngezinto ezinolusu ezinokuhambelana nolusu, imaski inokucocwa ngokulula, iphinde isetyenziswe yonke imihla kwaye inokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka emibini.
I-coronavirus isasazeka ngamathontsi okuphefumla xa umntu osulelekileyo ekhohlela okanye ethimla, okanye xa ehlangana nendawo engcolileyo aze achukumise amehlo, impumlo okanye umlomo.
Eyilwe ngedatha yobuso be-3D ukuze ihambelane neemilo zobuso ezahlukeneyo, i-silicone ethambileyo iyangqinelana nobuso babathwali, iyenza ikhululeke ukunxiba ixesha elide ngaphandle kohlengahlengiso, ukugruzuka okanye ukucaphuka.
Indawo yokusebenzela yomngundo
Ukudala ixabiso kubathengi kunye nokwenza okugqibeleleyo yifilosofi yethu. Uyakuqonda inzuzo enkulu ngokusebenza kunye ne-CPM!
Sinamava kuzo zonke iintlobo zesinyithi nokufakwa kwemigangatho yamanye amazwe
Egqithileyo Isiciko esincinci sokuhambisa i-servo
Okulandelayo: ICandelo loLawulo kunye neCharge Connector esezantsi
Iifilitha zeoyile Iminyinyiva yePlastiki
ICandelo loLawulo kunye neCharge Connector esezantsi
Umatshini wePOS wekhadi letyala